VOA English Lesson 27 Smoke ... Business စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ By ဒေါ်လှလှသန်း - Myanmar Network
VOA English Lesson 27 Smoke ... Business စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ By ဒေါ်လှလှသန်း
Posted by Master Learner on April 10, 2012 at 13:07 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
တနင်္လာ, 11 ဧပြီ 2011
ဒီတပတ် English Learning: America Idioms and Expressions ကဏ္ဍမှာ တင်ပြပေးထားတဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများမှာ smoke and mirrors, red herring နဲ့ funny business တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးတင်ပြပေးမယ့် အီဒီယံအသုံးအနှုန်းမှာ smoke and mirrors ဖြစ်ပါတယ်။ Smoke = မီးခိုး, Mirrors = မှန်၊ ကြေးမုံ၊ ကြည့်မှန် တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က မီးခိုးနဲ့ ကြည့်မှန်များ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးအနှုန်း ဆင်းသက်လာတာကတော့ မျက်လှည့်က ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်လှည့်ပြဆရာတွေက သူတို့ ဥံဖွလုပ်ပြီး ပျောက်စေတဲ့ပစ္စည်းအရာတွေကို လူတွေရဲ့  အမြင်ကနေ ပျောက်ရလေအောင် ကြည့်မှန်တွေ နဲ့ မီးခိုးလုံးတွေကို သုံးစွဲပြီး မျက်လှည့်ပြရာကနေ ဒီအသုံးအနှုန်း ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ ဒါကြောင့် အီဒီယံအသုံးအဓိပ္ပါယ်က လှည့်ဖြားဖို့၊ အမှန်ကိုဖုံးကွယ်ဖို့ ဟိုလိုလို ဒီလိုလို မလိမ့်တပတ်၊ ယုန်ထင်ကြောင်ထင်ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်တာကို ခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအသုံးအနှုန်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ George Crows ပေးတဲ့ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Isacurrent crisis smoke and mirrors? Or, is it meant to cover the fact that the government will soon run out of money.
ဒီလက်ရှိ ပြဿနာက အမှန်ကို ဖုံးကွယ်ဖို့ ကြိုးစားတာလား။ ဒါမှမဟုတ် တကယ့်ဖြစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့ အစိုးရရဲ့  အသုံးစရိတ် မကြာမီ ကုန်တော့မယ်ဆိုတာကို ဖုံးကွယ်ဖို့ ရည်ရွယ်တာလား။
ဒုတိယတင်ပြပေးမယ့် အသုံးအနှုန်းက red herring ဖြစ်ပါတယ်။ Red = အနီရောင်, Herring = မြောက်အတ္တလန္တိတ် ဒေသမှာတွေ့ရတဲ့ ငါးသလောက်တမျိုး တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အဲဒီ ငါးကို ကြပ်တိုက်လိုက်ရင် နီလာတဲ့အတွက်ကြောင့် red herring လို့ ခေါ်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ကြပ်တိုက်ထားတဲ့ ငါးသလောက်အနီရောင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးဆင်းသက်လာတဲ့အကြောင်း အမျိုးမျိုးအနက်မှ တခုက ရှေးတုန်းက ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်သူတွေနောက်ကို အနံခံတဲ့ခွေးနဲ့ လိုက်ရှာရာမှာ သူတို့လူနံပျောက်စေဖို့ red herring - ကြပ်တိုက်ထားတဲ့ ငါးအနံအသက်ကိုသုံးပြီး အနံပျောက်ရလေအောင် ရှေ့ ကနေ ငါးကို တရွတ်တိုက်ဆွဲရာကနေ ဒီအသုံးဆင်းသက်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီအသုံးရဲ့  အီဒီယံက လွဲမှားစေဖို့ အမှန်ကိုမမြင်နိုင်စေဖို့၊ ဇဝေဇဝါ လုပ်ကြံတဲ့ သဲလွန်စမျိုး ချထားပေးတာမျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် အာရုံပြောင်းလုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်ဘဝမှာလည်း ရာဇဝတ်မှုကို ခြေရာခံလိုက်ရာမှာ လမ်းလွှဲစေဖို့၊ မဆိုင်တဲ့ သဲလွန်စတခုခုကို ချထားတာမျိုးမှာ အသုံးပြုလာသလို၊ အကြံအစည်းတွေမှာလည်း ကိုယ်ကြံစည်းတာ သူများမသိရလေအောင် ဖုံးကွယ်နိုင်ဖို့ အာရုံပြောင်းလုပ်၊ တွေးစရာဖြစ်စေတဲ့ တမျိုးတမည် ထင်ရလေအောင် မသိမသာ ထည့်ပြောတာမျိုးကို red herring လို့ ရည်ညွှန်းပြောလေ့ ရှိပါတယ်။
The murderer droppedared herring intoastatement he gave to the police detective. He wanted him to think he did not commit the crime.
လူသတ်သမားက ရဲစုံထောက်ကို စစ်ချက်ထွက်ဆိုရာမှာ သူ့အပေါ် အာရုံပြောင်းစေမယ့် သဲလွန်စထည့်ပြီး ပြောဆိုလိုက်တယ်။ သူ အဲဒီရာဇဝတ်မှု မကျူးလွန်ဘူးဆိုတာကို ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်လိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ လုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်။
နောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့် အသုံးအနှုန်းမှာ funny business ဖြစ်ပါတယ်။ Funny = ဟာသ၊ ရယ်စရာ, Business = စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ရယ်စရာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ဒီနေရာမှာ funny က ရယ်စရာမဟုတ်ဘဲ၊ Funny business က မှုမမှန်တာ၊ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနဲ့ မညီတဲ့ အပြုအမှု၊ အလေ့အကျင့်ကို ရည်ညွှန်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာမှာတော့ တခုခု မဟုတ်တယုတ် လုပ်တာကို ဆိုလိုပါတယ်။
He said he is earningalot of money, but I have suspicion of his money making tactics. I must say he is up toafunny business.
သူ ဝင်ငွေကောင်းတယ်လို့ ပြောပေမယ့် သူငွေရှာတဲ့ နည်းလမ်းတွေအပေါ် ကျနော် သံသယရှိနေတယ်။ မဟုတ်တယုတ် လုပ်နေတယ်လို့ ပြောရလိမ့်မယ်။